iOS Device တွေက ရေရှည်မှာ ဘာကြောင့် Android ဖုန်းတွေထက် ပိုအဆင်ပြေသလဲ - PX
“iOS နဲ့ Android ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းလဲ” ဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာ အခုအချိန်ထိ နှစ်ဖက်သော Fan တွေနဲ့ Smartphone ဝါသနာအိုးတွေကြားမှာ ပွဲဆူစေတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ တစ်ချိန်က OS ပိုင်းမြန်ဆန်သွက်လက်မှုမှာ Android ဟာ iOS ထက် အမြဲလိုလို နောက်ကောက်ကျခဲ့ရပေမယ့် ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ အဲဒီကွာခြားချက်တွေဟာ မရှိသလောက် နဲပါးကုန်ပြီဆိုတာ Speed Test တွေမှာ အသာရခဲ့တဲ့ Android ဖုန်းတစ်ချို့ကနေ သက်သေပြနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Android ဘက်က ဘယ်လိုတိုးတက်လာတယ်ပဲဆိုဆို ရေရှည်သုံးဖို့ ဆိုတဲ့အတွေး ဝင်လာတိုင်းမှာ လူအများစု (ကျွန်တော်အပါအဝင်) ဟာ iOS ဘက်ကိုပဲ ပိုပြီးအာရုံရောက်သွားတတ်ကြတာဟာ ဘာကြောင့်လဲ?
အဲဒီလိုပြောလိုက်လို့ Admin က iSheep ကြီးပါ လို့ထင်ရင် ခင်များတို့အတွေးမှားနေပြီလို့ ပြောပါရစေ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က Android ရဲ့ လွတ်လပ်မှု၊ Customization၊ ပိုများတဲ့ Function တွေနဲ့ စိတ်ကြိုက်ကလိနိုင်မှု စတာတွေကို ပိုသဘောကျသူမို့ Android ကိုပဲ အမြဲဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် ၂ နှစ်နဲ့အထက်ကိုင်နိုင်မယ့် ဖုန်းတစ်လုံးကိုရွေးပါ၊ ဒါမှမဟုတ် ထွက်ထားတာ ၂ နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကို ဈေးကြီးပေးဝယ်ပါလို့ ပြောလာရင် Apple ကိုပဲ သေချာပေါက်ရွေးချယ်မိမှာပါ။ ဒါဟာ ဖုန်းတစ်လုံးကို Software Update ၄ နှစ်နဲ့အထက် ပေးတယ်ဆိုတာထက်ပိုတဲ့ iOS Device တွေရဲ့ Time to Performance Ratio ကောင်းမွန်မှုကြောင့်ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဆို ဘယ်အရာတွေက iOS ကို ရေရှည်မှာ သွက်လက်နေစေတာလဲ။ ဒီမေးခွန်းကို လက်ရှိကြည့်ဖူး၊ ဖတ်ဖူးသမျှထဲက အကြိုက်မိဆုံးအဖြေဖြစ်တဲ့ C4ETech ရဲ့ Video ကနေ ထုတ်နုတ်ပြောပြပေးသွားပါ့မယ်။
ဒီစကားလုံးဟာ iOS နဲ့ Apple ရဲ့ Ecosystem ကို တိုတိုနဲ့လိုရင်းကို ထိရောက်တဲ့ အသုံးနှုန်းပါ။ iPhone တစ်လုံးရဲ့ ဖြစ်တည်မှု၊ ဖွဲ့စည်းမှုအပိုင်းဟာ Android ထက် အဆင့်ပိုနည်းပြီး ရိုးရှင်းတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် iPhone တစ်လုံးမှာ Hardware, Kernel နဲ့ Software (Application) ဆိုတဲ့ ၃မျိုးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပေမယ့် Android မှာတော့ အဲဒီအပိုင်းတွေအပြင် Java Emulation Layer, Android Framework နဲ့ Runtime တွေ၊ OEM အသီးသီးက သက်ဆိုင်ရာ UI တွေ ထပ်ဆောင်းပါဝင်နေပါတယ်။
ဒီတော့ C4ETech ရဲ့ ဥပမာအတိုင်း ပြောရရင် “iOS က အသားသီးသန့်ညှပ်ထားတဲ့ Burger နဲ့တူပြီး Android ကတော့ အလွှာအများကြီးပါတဲ့ Burger နဲ့ တူတယ်။ ဆိုလိုတာက Android ဘက်မှာ အရသာပိုစုံတာမှန်ပေမယ့် ယှဉ်ပြီးစားရင် ဘယ်သူမြန်မြန်ကုန်မလဲ? iOS ကလည်း ထိုနည်းတူပါပဲ။” ဒါဟာ Android မှာ Functionality ပိုပြီး စုံစုံလင်လင်သုံးရတာမှန်ပေမယ့် ပိုပြီး Simple ဖြစ်တဲ့ iOS က ရေရှည်မှာ ပိုပြီးသွက်လက်နေရခြင်း အကြောင်းရင်းပါ။
Apple ဟာ Smartphone Manufacturer ပါ။ Raw Materials ထုတ်လုပ်တဲ့ Company မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် iPhone မှာလိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းအသီးသီးကို Supplier တွေဆီကနေ မှာယူရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူလိုကိုယ်လိုမှာယူတာမျိုးမဟုတ်ပဲ သူတို့စိတ်ကြိုက် Design အနေအထားကို ရေးဆွဲပြီးမှ မှာယူလေ့ရှိတယ်။ (ဥပမာ iPhone Xs မှာသုံးတဲ့ Battery ပုံစံမျိုး) အဲဒီအတွက် သူတို့မှာယူတဲ့ပစ္စည်းအများစုဟာ iPhone နဲ့ Apple Device တွေမှာ သီးသန့်သုံးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေပါတယ်။
C4Etech ဥပမာပေးသလိုပြောရရင် Apple ရဲ့ A12 Bionic Chipset ဟာ iPhone Device (XS and XS Max) နှစ်ခုအတွက်ပဲ သီးသန့်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတွက် ဒီဖုန်းနှစ်လုံးမှာပါဝင်မယ့် တခြားအရာတွေနဲ့ ကောင်းကောင်းချိတ်ဆက်ဖို့ကိုပဲ Apple အနေနဲ့ အာရုံစိုက်ဖို့ လိုတော့တယ်။ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon Chipset မှာတော့ အခြေအနေက ပြောင်းပြန်ပါ။ သူ့ကိုဝယ်သုံးမယ့် ဖုန်းအမျိုးမျိုးရဲ့ Display Size, Resolution, RAM, Camera စတဲ့ အမျိုးမျိုုးသောအချက်တွေကို ကာမိအောင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရတယ်။
နောက်ပြီး Apple ဟာ ဖုန်းရောင်းမယ့် Company ပါ။ Chipset ရောင်းတဲ့ Company မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် သူတို့အတွက် Chipset ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို ငဲ့နေစရာမလိုပဲ ဖုန်းရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ထဲ ထည့်စဉ်းစားနိုင်တယ်။ Qualcomm တို့လို Chipset Maker တွေအတွက်တော့ ထည့်ရမယ့် Performance နဲ့ ရောင်းရမယ့်ဈေးနှုန်းကြားမှာ နောက်ဆံတင်းစရာတွေရှိနေပါသေးတယ်။ NFC ဆိုလည်း ထိုနည်းတူပါပဲ။ iPhone အနေနဲ့ Apple Pay တစ်ခုကိုပဲ အာရုံစိုက်ရချိန်မှာ Android အနေနဲ့ တခြား Payment နဲ့ Function တွေပါ ဂရုစိုက်ရပြန်တယ်။ ဒီလိုအချက်တွေကြောင့်လည်း iPhone, iPad တွေပေါ်က Chipset တွေဟာ Laptop CPU တွေကို ရင်ပေါင်တန်းနိုင်လာတဲ့အထိ Performance ပိုင်း တိုးတက်လာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းဖြစ်နေပါတယ်။
– Apps Optimization
iOS မှာ အသုံးပြုတဲ့ Application တွေဟာ Stable ပိုဖြစ်တာ၊ Functionality ပိုစုံတာကို iOS ရော Android ပါ ယှဉ်သုံးဖူးသူအများစု သိကြပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ iOS ဟာ Android ထက်ပိုတဲ့ Information Support ကို Developer တွေအတွက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာကြောင့်ပါ။ Developer တစ်ယောက်အနေနဲ့ iOS ပါ်မှာ သူတို့ရေးမယ့် Application နဲ့ကိုက်ညီဖို့ သတိထားစဉ်းစားရမယ့် Device (Hardware) အရေအတွက်ဟာ Android နဲ့ယှဉ်ရင် အတော့်ကိုနည်းပါပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Developer တွေဟာ Product နဲနဲအပေါ်မှာ ပိုအာရုံစိုက်နိုင်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့ Result တွေကို iOS ပေါ်မှာ ဖန်တီးနိုင်တာပါ။ ဒါ့အပြင် ရေးပြီးသား App တစ်ခုမှာ Feature အသစ်တစ်ခုကိုစမ်းမယ်ဆိုရင်လည်း ပိုပြီးတိကျမြန်ဆန်တဲ့ Feedback ကို ရစေနိုင်တယ်။ ဒီအချက်က Facebook မှာ Feature အသစ်ရတဲ့ Case မျိုးတွေ၊ ဂိမ်းတစ်ချို့(Fortnite) ကို iOS ပါ်မှာ ပိုပြီးစောစောနဲ့ Stable ဖြစ်ဖြစ် ဆော့နိုင်တာ စတာတွေရဲ့ အဓိအကြောင်းအရင်းဖြစ်နေပါတယ်။
အပေါ်မှာပြောသွားတဲ့အချက်တွေက ရေရှည်အသုံးပြုဖို့အတွက် iPhone ကို ရွေးခြယ်ကြခြင်းနဲ့ ထွက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ iPhone Model တွေကို ဆက်ပြီးရောင်းရစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေပါ။ ဒါပေမယ့် Apple ရဲ့ Closed Ecosystem ထဲမှာ ပိတ်မမိချင်သူတွေ၊ လွတ်လပ်မှု၊ ဖန်တီးမှုအသစ်တွေကို လိုလားသူတွေအနေနဲ့ကတော့ Android ဖုန်းတွေကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ကြပါလိမ့်မယ်။ Google ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူတို့ရဲ့ Pixel ဖုန်းတွေကို Software Support ၃ နှစ်အထိ ပေးလာတာရယ်၊ Security နဲ့ Smartness အပိုင်းတွေကို အားစိုက်လာတာရယ် စတာတွေကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ Android နဲ့ iOS ကြားက ကွာခြားမှုဟာ ဒီထက်ပိုပြီးကျဉ်းမြောင်းလာဖို့ပဲ ရှိနေပါတော့တယ်။
C4ETech ရဲ့ Original Video ကို ကြည့်ချင်သူတွေအတွက်လည်း အောက်မှာ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Photo and Video Credit: C4ETech, iFixit & Internet